Thailand - mhlawumbe ethandwa kakhulu phakathi yasekhaya izivakashi resort. Lapha ungakwazi ngempela uphumule kahle kakhulu, futhi ngamanani akhokhelekayo. Zonke izinhlobo nasemadolobhaneni angasogwini nemizana ukuthi iphelele kuze kube iholidi ngaphambi, e Thailand, kunezindlela eziningi. Lapha zivakashi kulindeleke hhayi kuphela ukuhlanza amabhishi nolwandle efudumele, kodwa futhi evuthiwe ingqalasizinda izivakashi.
holidaymakers eziningi ezifuywayo ezikhathini zamuva bakhetha ukuthenga izinkambo beya emzaneni elihle Krabi (Thailand). Izibuyekezo mayelana ukuphumula edolobhaneni Thai phakathi izivakashi Russian e ezinhle ingxenye ngoba, ukuthi kulula zisuswe yokuhlala ukhululekile ngemali ephansi. Okudumile holidaymakers njengoba Krabi resort waqala ukuthola kamuva. Nokho, ingqalasizinda isivele athuthukiswe kahle ngempela. Izibuyekezo ezinhle kakhulu on the net, isibonelo, zikhona mayelana Ihhotela Palm ePharadesi kuyona 3 *.
indawo Ihhotela sika
Ihhotela Palm iPharadesi km 30 enhloko-dolobha zesifunda Krabi, edolobheni Ao Nang, esundu Grove encane. Itekisi esuka esikhumulweni sezindiza ehhotela akuyona ebiza kakhulu. Intengo uhambo ukusuka Krabi ukuba Ao Nang wonke 600 baht. Uma wayefisa, ungakwazi ukufinyelela emzaneni ngebhasi. Kulokhu, kuyenzeka ukuthi uma enginika ithikithi ukukhokha baht 150 kuphela.
Labo izivakashi abangafuni ukuthatha itekisi esuka esikhumulweni sezindiza ukuba Ao Nang futhi konke Shake in the ibhasi ngesikhathi sokushisa, kubalulekile ukuba oda Dlulisa inkampani yokulungisela abahambayo ukuthi ithengiswe ithikithi futhi uhlale e-Palm ePharadesi ehhotela. Le sevisi izobiza ruble 2,000 abantu abadala ababili.
Kusukela kolwandle, leli hhotela ikude ngempela kude - 800 metres. Nokho kakhulu isiphazamiso izivakashi zayo, nahlulele by ukubuyekezwa, ke Akawukhululi. Empeleni ukuba ugu kusukela ehhotela kufanele uhambe imizuzu engu-15. I esilinganayo kuyodingeka ichithe ama ku ukushaywa eduze kolwandle ebhishi.
Yiqiniso, a-yehora uhamba kungenzeka elula akuyona yonke izivakashi. Ngakho-ke, ihhotela Palm ePharadesi ifakiwe ohlwini lwemisebenzi kanye kwamahhala ebhishi. Isimiso sansuku zonke yegoli yayo ebheke ocean uthumele tuk-tuk. 'Hamba uye kulesi itekisi bendabuko Thai ebhishi kuyodingeka 5-10 imizuzu. Ihhotela inohlelo khulula tuk-tuk kulo ulwandle kuphela kuze 22 ntambama. Kufanele kubhekwe. Nokho, uma izivakashi imisiwe ogwini ngasekupheleni - akunankinga. Hamba ehhotela kulokhu futhi ozikhethela. Uma wayefisa, futhi kungenziwa esafinyelelwa zomphakathi tuk-tuk. Kuwufanele etekisini Thailand azibizi kakhulu.
Incazelo Ihhotela nendawo yalo
Ingabe ehhotela Palm ePharadesi kuyona 3 * kuyinto eziyinkimbinkimbi elincane ehlanganisa isakhiwo esikhulu futhi izindlu ezincane ezimbalwa. Insimu ehhotela, izivakashi ukuthole kuyinto enhle kakhulu futhi uzilungise. zasemazweni ashisayo itshalwe nazi nje lenqwaba ngempela. Amathrekhi egcekeni embozwe tile kuvuleke, futhi eduze kumavila isakhiwo eziyinhloko zezimbali enhle. A ingxenye enkulu egcekeni ihhotela yokubhukuda ihlanganisa.
Villas Ihhotela has a izakhiwo ezithakazelisa kakhulu, ukukhanya futhi ezungezwe zasemazweni. Lesi sakhiwo esikhulu (ezine izibuya) yakhiwe e isitayela wesimanje. Ukuhamba ezindleleni ensimini yase ihhotela ntambama, ngokusho iningi izivakashi, kulula kakhulu. Kodwa endaweni ehhotela ebusuku, ngeshwa, engamboziwe. Uma lokhu ithrekhi oluphakeme ewumngcingo egcekeni ehhotela. Ngaphezu kwalokho, phakathi tile kubo kwezinye izindawo kukhona izikhala. Ngakho-ke, ukuhambisa ebusuku kanye ezindleleni ihhotela kufanele uqaphele.
Isiyonke imali Thai Ihhotela Palm ePharadesi linikeza izivakashi zayo 45 amafulethi ukhululekile. Lesi sakhiwo main izivakashi kuyakuba Ao nanga Igumbi sesethi lamakamelo (52-70 m2). Kuyinto empeleni amakamelo ukhululekile kakhulu futhi ivulekile. Nokho, iningi izivakashi Russian Ukhumula Yiqiniso, Bungalow engabizi e-Palm ePharadesi kuyona 3 *. Izinhlobo amakamelo Villas, leli hhotela inikeza okulandelayo: Palm Garden Villa (35 m 2), noma-Palm Twin Villas (40 m 2). Zonke Suites ehhotela futhi kungaba abantu ababili. Uma wayefisa, izivakashi zijabulela emzaneni libuye libe esihlalweni ezengeziwe.
Igumbi ngalinye has a emphemeni e isakhiwo main. amakamelo yangempela ngokwabo anemisila:
ephephile futhi ngocingo;
TV nge-DVD player;
air conditioning ne esiqandisini.
Shower yokugezela egumbini ngalinye izici ngamunye. Uma wayefisa, izakhamuzi ungakwazi ukujabulela kuhlanganise hairdryer. TV flatscreen kule ehhotela kanye eqinisweni kakhulu TV - ikhebula. Service in the amakamelo ehhotela ngemali eyengeziwe. incekukazi Daily ukuletha izivakashi iqoqo itiye / ikhofi. Le sevisi mahhala. Ukupheka kungaba isiphuzo akhuthazayo egumbini lakho. Zonke imishini ezidingekayo itholakala amakamelo. Kukhona amakamelo lokhu ehhotela kanye mini-bar.
Izibuyekezo lamakamelo kuleli hhotela inethiwekhi ngokuyisisekelo okuhle. buka Good kusukela Krabi futhi kwadingeka izivakashi ingqalasizinda ehhotela. Ngezamabhizinisi, isibonelo, ungakwazi baqashe ikamelo inkomfa lapha. Lelikamelo ku hhotela kahle esikhulu futhi yokuhlala kuze kube abantu abangu-80 ngesikhathi esisodwa.
Uma kudingekile, izakhamuzi ehhotela nethuba ugeza nelineni angcolile izindawo wahlomisa ngokukhethekile ngalezi zinhloso. Khuluma izihlobo noma abangane ukuze uhlale e-Russia, ihhotela kungenzeka kuhlanganise, ngokwesibonelo, ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Ehhotela (yokwamukela izivakashi) imahhala-Wi-Fi.
Enye isevisi ezithakazelisayo enikeziwe izivakashi ehhotela Palm ePharadesi kuyona 3 * (Krabi, Ao Nang) kuyinto isikhungo imfanelo. Izivakashi abafuna ukulondoloza ifomu ngokomzimba, nethuba zifezeke ejimini, abe massage (ngenkokhelo) nokunye. D.
Ukuzikhumbuza ntambama ehhotela Palm ePharadesi kuyona 3 * okungagcini nje e umphefumulo, kodwa futhi egcekeni, ukubhukuda echibini. Yena ehhotela akuyona likhulu kakhulu, kodwa elula for ukubhukuda. Ladder emanzini lapha hhayi angayendayenda, kanye nabasebenzi ehhotela bahlanza kaningi kakhulu isitsha. Amanzi ichibi efudumele ngokwanele. Eceleni ilanga loungers nezambulela, okuyinto ungasebenzisa mahhala.
Incenye lencane yaloku echibini ehhotela ukubhukuda has a phansi eliphezulu kakhulu futhi skirting. Lokhu "splash" kancane yakhelwe ukugeza izingane.
Zonke amakamelo ehhotela Palm ePharadesi kuyona 3 * aqashiwe ne kwasekuseni. Ekuseni abantu abahlala kulo muzi nethuba ukwehlela yokudlela udle high okumnandi. Ukwahlulela nge izibuyekezo izivakashi wangaphambili, ukudla ehhotela kahle. Zonke okulungiselwa ukudla by labapheki abanolwazi nge imikhiqizo fresh futhi izinga. Ezinye ibhulakufesi ukugxekwa ngesikhathi Palm ePharadesi ehhotela bafanelwe kuphela monotony. Kodwa uma izivakashi ngokuzumayo ukhathele ukudla nsuku zonke izitsha efanayo babekhonza yokudlela, ngaso sonke isikhathi unethuba ukuvakashela omunye amathilomu etholakala eduze ehhotela.
Yiqiniso, alenzanga nje ibhulakufesi, kodwa ukudla kwasemini kanye dinner e yokudlela ehhotela. Imenyu kule ndawo oluphakeme ahlukahlukene. Uma wayefisa, ngenkokhelo ungakwazi oda izitsha of cuisine wendawo kanye European.
Ugu lokhu hhotela impela kude. Kodwa hhayi kangangokuba savusa kwezingqinamba. Palm ePharadesi kuyona 3 * Ihhotela izivakashi babe nethuba lokuvakashela emabhishi Ao Nang noma, isibonelo, Nopparattara. Kuzo zombili lezi zimo, umsebenzisi-friendly yizivakashi kuqinisekisiwe.
Impela kucacile futhi ezolile futhi ulwandle efudumele - ukuthi umahluko phakathi Krabi (Thailand). Izibuyekezo mayelana ukuphumula edolobhaneni izivakashi ezinhle ngokukhethekile ngoba ungakwazi kahle ukuthamela ilanga futhi ukubhukuda.
Emaphakathi lolwandle emzaneni Ao Nang has a ubude mayelana ikhilomitha elilodwa nesigamu. Esikhathini eningizimu igcina rocks olunothile, futhi enyakatho - cape itshe. Umugqa lolwandle isezingeni tide ongaphakeme ubanzi kakhulu futhi embozwe isihlabathi esihle. Ogwini Ao Nang anhlobonhlobo yamakhefi nezindawo zokudlela. Futhi, izivakashi nethuba ukuthenga uhambo ngesikebhe ukuze emabhishi aseduze noma iziqhingi. Intengo le sevisi emhlabeni 100-300 baht ngenye indlela.
Beautiful ulwandle kwelanga kanye nemvelo omangalisayo - yilokho ngokuqinisekile ithuba lokujabulela izivakashi ehhotela Palm ePharadesi kuyona 3 *. Ibhishi Nopparatthara njengoba Ao nanga futhi embozwe isihlabathi futhi uzungezwe izintaba ebabazekayo. Nokubhukuda kule ndawo zingavumi ikakhulukazi, ngoba phansi obumbeni ulwandle lapha. Izivakashi eziningi vakashela ebhishi ngesikhathi tide ongaphakeme ukubheka ezihlukahlukene izinkalankala wendawo, noma ngokuhambisa ibhola aphume isihlabathi. Ngezinye izikhathi amanzi ku Nopparattara uya kude ukuze izivakashi bayakwazi ukuzihambela baye eziqhingini eziseduze olwandle.
Yiqiniso, nethuba izivakashi yehhotela ukuvakashela Palm eliyiPharadesi e Ao Nang nezinye amabhishi ngokulinganayo elula. Kunoma ikuphi, ukukhokha kule ndawo yeholide ngethuba ukubhukuda olwandle akudingeki. Zonke amabhishi e Ao Nang yomphakathi.
Palm ePharadesi kuyona 3 *: Izibuyekezo mayelana nendawo
Umbono mayelana ehhotela uqobo, ukuze izivakashi wayenamandla ikakhulukazi okuhle. Izibuyekezo Excellent ku ukuphithizela kwenethiwekhi, isibonelo, unendawo indawo yayo. Leli hhotela itholakala emgwaqweni ethule, nokungcebeleka izihambi, kuhlanganise ebusuku, akukho ukumisa. Izihlalo egumbini, nahlulele yi izibuyekezo izivakashi, pretty okuningi.
Promptness, ngezilokotho futhi umthwalo kwabasebenzi - liphinde okuthile ukudumisa izivakashi Palm ePharadesi Resort Ihhotela 3 *. Izikhungo lapha Kulinganiselwa amaholide uma hhayi emihlanu, khona-ke okuqinile ezine. Ukuhlanza amakamelo nsuku zonke. Ngakho-ke, indlela abukeka ngayo amakamelo ehhotela ethokomele futhi yothando. Izivakashi we downsides waphawula kuphela khona lenqwaba amafulethi izintuthwane. Ukwenza kube ezincane, uhamba abanolwazi belulekwa ukuba ungalokothi basishiye ukudla (izithelo, ubisi njalo njalo.). Kodwa omiyane ensimini ka ehhotela namakamelo awo cishe akukho.
Izibuyekezo ngengqalasizinda namandla
Ezinye izikhalazo zezivakashi leli hhotela lifanelwe for swimming pool insimu yalo akanayo ukujula kakhulu (55 cm kuphela). Mayelana Ezokudla Palm ePharadesi kuyona 3 *, njengoba sekushiwo, izivakashi ukukhuluma kahle. Kodwa namanje ukweluleka zifiki ukuba umcimbi, uma usukhathele ukudla Thai, beya ebhishi eziseduze Ao Nang cafe "Russia wethu". Lapha ungakwazi oda izitsha of cuisine Russian.
Palm ePharadesi kuyona 3 *: ukuzijabulisa for izivakashi
Ukuze ujabule nganoma iyiphi indlela ehhotela izivakashi zayo uzokwazi Yiqiniso, akunakwenzeka. Ngokusho abahambi kakhulu, leli hhotela kangcono iholidi lomkhaya ethule. Ukuzijabulisa kuphela ehhotela kungenzeka, mhlawumbe, ukubhukuda kuphela echibini. Iziteshi Russian TV Kakho lapha, kodwa inthanethi ngempela kancane.
Kodwa kule ndawo ngenxa izivakashi abafuna ukuchitha isikhathi ukwenza lokho nakanjani sibe. Ngo Ao Nang, ungakwazi, isibonelo, ukuya club ebusuku Planet Ao Nang, umdlalo we pool in the isikhungo Funky Fish, ahlale Pub O'Malley sika Irish nokunye. D.
Ngakho, nakuba abanye amaphutha kule ehhotela futhi kukhona, ngokuvamile, izivakashi yindawo ukhululekile kakhulu futhi ethokomele. Hlala Palm ePharadesi ehhotela ekhethiwe njengoba izindawo ka Ao Nang ukuncoma Wabasaqalayo izivakashi eziningi. Kubukeka Ihhotela Palm ePharadesi kuyona 3 * sibukeka kahle futhi ahlale namakamelo awo futhi Bungalows ngempela ngempela elula.
Ukukhweza ophahleni uhlelo - avelele